मेरो कलम Archives - Current Nepal News
लेखक बुद्धिसागरका १० चर्चित भनाइ
१) देखिने सबै कुरा सत्य हुँदैनन् र सत्य कुरा प्रायः देखिदैनन्। २) अरुको सफलतामा पनि खुशी हुन जाने फाइदा हुने रैछ । किनभने, आफू मात्रै सधैँ सफल भइरहन सकिदैन। ३) रिसुको उल्टो :सरीु पनि हुन्छ । कहिलेकाही उल्टो बोल्दा नि फाइदा हुन्छ । ४) मीठो गीत वा फिल्म वा साहित्य वा स्मृतिले आँसु झर्छन् भने सम्झिनुस् हृदय ढुङ्गा भइसकेको छैन । ५) पहिला इतिहास घोकिन्थ्यो, अचेल भोगिन्छ ! प्रेम कहिल्यै तगारो हुँदैन। प्रेमले तगारो खोल्छ। तगारो लाउने प्रेम नै हुँदैन। ६) एक दिन हामी हुने छैनौं । कसैले हाम्रो बारेमा [विस्तृतमा...]
लेखक नयनराज पाण्डेका १० चर्चित भनाइ
१) कविता साहित्यको आमा विधा हो । साहित्यकारले कविताको सम्मान गर्नु भनेको आमालाई सम्मान गरे सरह हो । २) काठमाण्डौमा हुँदा प्राय नेपालगन्जको सपना देख्छु । जब नेपालगन्जमा हुन्छु,मेरो आँखाबाट निद गायब हुन्छ । ३) वीपी, गणेशमान र भट्टराईका सपनाका त खुब कुरा गर्‍यौं । सुनेर आनन्दित पनि भयौँ धेरै वर्ष । अब तिमी आफ्ना सपनाको कुरा गर र भन हामीलाई, तिमीले यो देशलाई के बनाउने सपना देखिरहेछौ ? ४) पलायन मेरो शब्दकोशमा छैन । सबै खालका घातप्रतिघात, आरोप प्रत्यारोप, समस्या,पीडा र व्यवधानहरुसित लड्ने हो । [विस्तृतमा...]
लेखक अमर न्यौपानेका १० चर्चित भनाइ
१) हिजोआज यसै मनमा प्रश्न उठ्छ— चाडपर्वहरू व्यापार गर्न आएका हुन् कि धर्मसंस्कृति र सभ्यताको विकास गर्न ? २) सत्यको होइन शक्तिको, आस्थाको होइन अहंको लडाइँ भइरहेछ । ३) अलिअलि छोपिनु र अलिअलि देखुनु नै जीवन हो रहेछ । ४) मान्छेले हावाको सास फेर्छ, घरले मान्छेको । ५) लेखक र पाठकलाई जोड्ने पुलको नाम नै पुस्तक हो । यही पुस्तकको पुलबाट हिँड्दा पाठकले लेखक भेट्छन्, लेखकले पाठक । ६) एक किसिमले जिन्दगी चुरोटजस्तो रैछ । एकातिर आगो अर्कोतिर ओठ । आगोसँग रिसाएको चुरोट ओठसँग खुसी हुन्छ । तर ओठले नै आगोसँग [विस्तृतमा...]
लेखक अश्विनी कोइरालाका १० चर्चित भनाइ
१) घरबाहिर निस्कने बेलामा जब पुरुषलाई दारी काट्न अल्छी लाग्छ, जब स्त्रीलाई मेकअप गर्न दिक्क लाग्छ सम्झनुस् , उसको हृदयमा प्रेमको बाइलेन्स कम हुँदै गएको छ । उनीहरुको खातामा स्नेह डिपोजिट गरिदिनुहोस् । २) कहिलै साडी नलगाएकी आधुनिक युवती विवाहपछि गाउँको घरमा रातो सुतीको साडी लगाएर काम गरिरहेको देखिन्छे, मलाई संसारको सबैभन्दा सुन्दर दृष्य देखेजस्तो लाग्छ । ३) समाज बडो अनौठो हुन्छ । कडा मिजासको मान्छेलाई ‘साह्रै चुच्छो’ भनेर औंलो ठड्याइरहन्छ । नरम बोल्नेलाई ‘चेपारे’ भनेर डसिरहन्छ । समाज [विस्तृतमा...]
युवा लेखक सुबिन भट्टराईका १० चर्चित भनाइ
१) प्रेमले जित्न सकिन्छ भने दुश्मनी किन ? यस्तो सोचिन्थ्यो । होइन रहेछ । कहिलेकाही प्रेम भन्दा दुश्मनी मिठो र रुचिकर लाग्नेरहेछ । २) जनयुद्द देखियो । दरबार हत्याकाण्ड देखियो । गणतन्त्र देखियो । महाभुकम्प देखियो । संबिधान बन्या नि देखियो । भारतीय नाकाबन्दी त भोगियो नै । अब देश बिकास भएको हेर्ने ठुलो रहर छ । ३) सिरानी जतिसुकै नरम लगाउँ, बिझाउनु छ भने सपनाले पनि बिझाइ छाड्छ । ४) मान्छेहरु एकबारको जुनीमा दुइ पैसाका लागि चार दिनको सम्बन्ध आधा मिनेटमा ध्वस्त पार्न सक्दारहेछन् ५) जुनसुकै [विस्तृतमा...]